I-Litecoin yintoni kwaye ungayithenga njani ukuthenga iLitecoin? Konke malunga ne-LTC | Iindaba zeGajethi
UMiguel Gaton | | Imali engezantsi yedijithali, ngokubanzi
I-Litecoin yimali yedijithali yenqaku (P2P) esekwe kwisoftware evulekileyo kwaye efika kwimarike ngo-2011 njengomphelelisi weBitcoin. Kancinci kancinci iya isiba yimali engaziwayo esetyenziswa ngabasebenzisi abangakumbi nangakumbi, ikakhulu ngenxa yokulula ezinokuthi ziveliswe zezi ntlobo zemali, ezantsi kakhulu kunezo zeBitcoin.
Nangona ukuba sithetha ngayo Iimali zedijithali okanye i-cryptocurrensets ngoku nangoku Iibitcoins ziza engqondweni. Kodwa ayisiyiyo kuphela efumanekayo kwintengiso, kude nayo, kangangeminyaka embalwa, Ethereum iye yaba yenye indlela enzulu kwiBitcoinNangona sizisekela kwixabiso ngalinye lezi mali, isekhona indlela ende yokuhamba iyeyona ndlela iyinyani yeBitcoin, imali esele iyindlela yokuhlawula kwezinye zeenkampani ezinkulu ezinje ngeMicrosoft, iSteam , Expedia, Dell, PayPal ukubiza imizekelo embalwa.
Ufuna tyala imali kwiLitecoin? Kulungile fumana i- $ 10 SIMAHLA kwiLitecoin ngokunqakraza apha
Kule nqaku siza kukubonisa Yonke into ofuna ukuyifumana malunga neLitecoin, yintoni, isebenza njani kwaye uyithenga phi.
1 Yintoni iLitecoin
2 Umahluko phakathi kweLitecoin kunye neBitcoin
3 Ngubani odale iLitecoin
4 Ndizifumana njani iiLitecoins
5 Izibonelelo kunye nezinto ezingalunganga zeLitecoin
6 Ungazithenga njani iiLitecoins
I-Litecoin, njengayo yonke imali yedijithali, yinto engaziwayo ye-imali yedatha eyenziwe ngo-2011 njengenye indlela yeBitcoin, esekwe kwinethiwekhi ye-P2P, ke akukho xesha lilawulwa naliphi na igunya, ngokungathi iyenzeka ngeemali ezisemthethweni zamazwe onke, kungoko ixabiso lazo lihluka ngokwemfuno. Ukungaziwa kwale mali kuvumela fihla ubunikazi ngamaxesha onke yabantu abaqhuba intengiselwano, kuba yenziwa ngesipaji sombane apho kugcinwa khona zonke iimali zethu. Ingxaki kwezi ntlobo zeemali ziyafana nanjengoko kusoloko kunjalo, kuba ukuba ziyasiphanga, asinayo indlela yokwazi ukuba ngubani othulule isipaji sethu.
I-blockchain, eyaziwa ngokuba yi-blockchain, yeLitecoin iyakwazi ukuphatha umthamo ophezulu wentengiselwano kuneBitcoin. Ngenxa yokuba imveliso yebhloko ixhaphake kakhulu, inethiwekhi ixhasa intengiselwano ngakumbi ngaphandle kwesidingo sokuguqula isoftware ngokuqhubekekayo okanye kwixa elizayo. Ke, Abarhwebi bafumana amaxesha okuqinisekisa ngokukhawulezaUkugcina banakho ukulinda ezinye iziqinisekiso xa bethengisa izinto ezibiza kakhulu.
Umahluko phakathi kweLitecoin kunye neBitcoin
Ukuba sisiphumo okanye imfoloko yeBitcoin, zombini ii-cryptocurrensets zisebenzisa inkqubo efanayo yokusebenza kwaye umahluko ophambili ufumaneka kuwo inani lokukhutshwa kwezigidi zemali, ebekwe kwimeko yeBitcoin kwizigidi ezingama-21, ngelixa Elona xabiso liphezulu leLitecoins zizigidi ezingama-84, Amaxesha amane ngaphezulu. Olunye umahluko lufunyenwe kukuthandwa kwezimali zombini, ngelixa iBitcoin yaziwa ngokubanzi, iLitecoin incinci kancinci yenza isifotho kule marike yemali ebonakalayo.
Fumana iidola ezili-10 SIMAHLA kwiLitecoin ngokunqakraza apha
Omnye umahluko uyafumaneka xa kufikwa ekufumaneni iimali ezibonakalayo. Ngelixa imigodi yeBitcoin isebenzisa i-SH-256 algorithm, ethi ifuna ukusetyenziswa kweprosesa ephezulu kakhulu, Inkqubo yemigodi yeLitecoin isebenza nge-scrypt efuna isixa esikhulu sememori, ishiye iprosesa.
Ngubani odale iLitecoin
Owayesakuba ngumqeshwa kuGoogle, uCharlie Lee, ngoyena ubangela ukwenziwa kweLitecoin, ngenxa yokunqongophala kwezinye iindlela kwimarike yemali ebonakalayo kwaye xa babengekabi yimali efanayo kulo naluphi na uhlobo lwemali. UCharlie wathembela kwiBitcoin kodwa ngenjongo Guqula le mali ibe yindlela yokubhatala ezinzile kwaye ungaxhomekeki ngokugqithileyo kwizindlu zotshintshiselwano, into ethe yakwazi ukuqinisekisa akwenzeki ngeBitcoin.
Ke ukuba le mali khange ichaphazeleke nengqikelelo, indlela yokuzifumana ilula kakhulu kwaye iyalingana, ukuze njengoko zisenziwa, inkqubo ayinzima okanye inciphise inani leemali ezikhoyo. I-Bitcoin yenzelwe ukuphatha iimali ezigidi ezingama-21Ngelixa kwiLitecoin kukho imali eziinkozo ezizigidi ezingama-84.
Ndizifumana njani iiLitecoins
I-Litecoin yimfoloko yeBitcoin, ke isoftware ye qalisa ukumbiwa kweBitcoins iyafana ngokutshintsha nje okuncinci. Njengoko benditshilo ngasentla, umvuzo wezimayini zeLexcoins unenzuzo ngaphezu kweBitcoin. Okwangoku kwibhloko nganye entsha sifumana i-25 Litecoins, isixa esincitshiswe ngesiqingatha seminyaka emi-4 phantse, isixa esisezantsi kakhulu kunoko sikufumanayo ukuba sizinikezela kwimigodi yeBitcoins.
I-Litecoin, njengazo zonke ezinye iimali ezifihlakeleyo, yiprojekti yesoftware evulekileyo epapashwe phantsi kwelayisensi ye-MIT / X11 esivumela ukuba sibaleke, siguqule, sikope isoftware kwaye siyisasaze. Isoftware ikhutshwa ngenkqubo esekuhleni evumela ukungqinisisa okuzimeleyo kweebinaries kunye nekhowudi yemithombo efanelekileyo. Isoftware eyimfuneko yokuqala imayini yeLitecoins inokufunyanwa kwifayile ye- Litecoin iphepha elisemthethweni, kwaye iyafumaneka kwiWindows, Mac, kunye neLinux. Singayifumana ikhowudi yemvelaphi
Ukusebenza kwesicelo akukho mfihlakalo, kuba kufuneka senze njalo khuphela le nkqubo kwaye uya kuqala ukwenza umsebenzi wakhe, ngaphandle kokuba singenelele nangaliphi na ixesha. Isicelo ngokwaso sisinika ukufikelela kwisipaji apho zonke iiLitecoins esizifumanayo zigcinwa nalapho sinokuthi sithumele khona okanye sifumane ezi mali kunye nokubonisana nazo zonke izinto esele sizenzile ukuza kuthi ga ngoku.
Enye indlela yokwenza imigodi yeLitecoins ngaphandle kokutyala imali kwikhompyuter, siyifumana njengeSheriton, inkqubo yemigodi yelifu Sinokuphinda sisebenzise i-Bitcoins kunye ne-Ethereum. I-Scheriton isivumela ukuba simisele inani le-GHz esifuna ukuyabela kwimigodi, ukuze sikwazi ukuthenga amandla amaninzi ukufumana iiLitecoins zethu okanye ezinye iimali ezikhoyo ngokukhawuleza.
Izibonelelo kunye nezinto ezingalunganga zeLitecoin
Izibonelelo esizinikwa nguLitecoin ziphantse zifane esinokuzifumana kunye nezinye iimali ezikhoyo, ezinjengokhuseleko kunye nokungaziwa xa usenza naluphi na uhlobo lwentengiselwano, ukungabikho kwee-commissions ukusukela iintengiselwano zenziwa ukusuka kumsebenzisi ukuya kumsebenzisi ngaphandle kongenelelo lwawo nawuphi na umzimba olawulayo kunye nesantya, okoko ukuhanjiswa kolu hlobo lwemali kwangoko.
Eyona ngxaki iphambili ejongene nale mali namhlanje kukuba ayithandwa njengeBitcoin namhlanje, imali phantse wonke umntu ayaziyo. Ngethamsanqa, enkosi ngokuthandwa kwale mali, ezinye iindlela ezikhoyo ezikhoyo kwintengiso ziya zisetyenziswa ngakumbi ngabasebenzisi, nangona okwangoku bengekho kwinqanaba leBitcoin, imali esele iqalile iinkampani ezinkulu ukusebenzisa njengendlela yokusebenzisa intlawulo.
Ungazithenga njani iiLitecoins
Ukuba asizimiselanga ukuqala kwimigodi yeLitecoins, kodwa sifuna ukungena kwihlabathi elinemali engaziwayo, sinokukhetha thenga ii-litecoins ngeCoinbase, yeyona nkonzo intle okwangoku ivumela ukuba siqhube naluphi na uhlobo lwentengiselwano ngolu hlobo lwemali. ICoinbase isinika isicelo sokudibana neakhawunti yethu nangaliphi na ixesha kuzo zombini i-iOS kunye ne-Android, isicelo esisinika ulwazi oluneenkcukacha malunga nokutshintsha okunokubakho kwimali.
Ngaba ufuna ukutyala imali kwiLitecoin?
Cofa apha ukuze uthenge iLitecoin
Ukuze uthenge le mali yokwenyani, kufuneka kuqala songeze ikhadi lethu letyala okanye sikwenze kwiakhawunti yethu yebhanki.
Ungaphoswa yi- $ 10 yakho SIMAHLA kwiBitcoin ngokunqakraza apha!
I-Coinbase: Tshintshela i-BTC, i-ETH, i-SHIBMahala
Umthuthukisi: Coinbase Android
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Te knoloji » Imali engezantsi yedijithali » Yintoni iLitecoin kunye nendlela yokuthenga iLitecoin?
Nantsi indlela ebukeka ngayo iMeizu M6, ifowuni elungileyo, entle nexabiso eliphantsi